Ruushka oo ku biirey dalalka aan ku raacsaneyn faragalinta Ankara ee qadyadda Liibiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ruushka oo ku biirey dalalka aan ku raacsaneyn faragalinta Ankara ee qadyadda...
Ruushka oo ku biirey dalalka aan ku raacsaneyn faragalinta Ankara ee qadyadda Liibiya
Ruushka wuxuu ku biirey dalalka badan ee aan ku raacsaneyn faragalinta Ankara ee qaddiyadda Liibiya, in kasta oo labada waddanba loo yiqiin iney iska xulufaystaan oo ay isku raacaan”xulafada nidaamka difaaca.”
Jimcihii, Moscow, iyada oo loo marayo Wasaaradda Arrimaha Dibadda, waxay muujisay welwel weyn oo ku saabsan halista suurtagalka ah ee Turkiga ee ah inay ciidan u dirto Liibiya, iyada oo loo maleynayo inay taageereyso dowladda Fayez al-Sarraj.
Waxay sheegtay in heshiisyada badda iyo amniga ee ay wada gaareen Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo al-Sarraj dabayaaqadii November ay su’aalo ka keeneen.
Ogeysiiskan, Russia waxay go’aamisay mowqifkeeda labada heshiis, xallinta halkaan waxay ka dhigan tahay mowqif mucaarad ah, ama ugu yaraan ay is khilaafeen.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, Ruushku wuxuu ku qancay isagoo sheegay inay wadahadalo la yeelanayaan dhinacyada la xiriira dhibaatada Libya.
Ku dhawaaqista Ruushka ayaa timid maalmo ka hor imaatinka wafdi rasmi ah oo ka socda dalka Turkiga oo ku wajahan magaalada Moscow, halkaas oo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku sheegay shirkiisii ​​jaraa’id ee sanadlaha ahaa, in loo gudbin doono faylka Libya wafdiga.
Wuxuu ka hadlay inuu si shakhsi ah ugala hadli doono arrinta Liibiya dhiggiisa Turkiga Erdogan.
Wadahadalka Ruushka wuxuu ka careysiiyay madaxweynaha Turkiga, kaasoo ku deg degay inuu dhaho dalkiisa “kama aamusi karo” wax qabad, oo uu ugu yeeray Ruushka “calooshood u shaqeystayaal” Libya.
Erdogan wuxuu sheegtey inay jiraan shirkad amniga Ruushka ah oo la yiraahdo “Wagner” oo la dagaallameysa ciidamada Qaranka Libya.
Ciidamada Qaranka Liibiya way dafireen inay taageero ka helaan hay’ad kasta oo ajnabi ah, ama jiritaanka dagaalyahanno ka yimid dibedda dalka, kuwaas oo ka barbar dagaalamaya .. Ruushka wuxuu ku biiray dalal badan iyo bucshiro aan ogolayn faragelinta Ankara ee arrimaha Liibiya, in kasta oo labada waddan loo aqoonsaday “xulafo” Nidaamka difaaca. ”
Ciidanka Qaranka Liibiya way dafirayaan inay taageero ka helaan hay’ad kasta oo ajnabi ah, ama joogitaanka dagaalyahanno ka socda dibadda dalka, kuwaas oo ka barbar dagaalamaya.
James Swan oo kulan la qaatay Madaxda Puntland+Sawirro